Jabhada Somali Galbeed Waa Halyeeyo ka Soo Baxay Shacabka – Rasaasa News
Apr 18, 2010 ethiopia, ONLF, Somali Galbeed
Midowga jabhada xoraynta Somali galbeed waxay taariikh dheer ku leedahay dhamaan gayiga Somalia khaastan wadanka Somali galbeed ee ay guumaysato dawlada Ethiopia. Jabhadu waxay 18kii sano ee ugu danbaysay dagal hubaysan kula jirtay ciidamada Ethiopia iyada oo dagalyahanada jabhada Somali galbeed weerara hayeen xeryaha ciidamada,dhuufaysyada iyo waliba dagallo dhaba gal ah.
Jabhada Somali galbeed waxay soo martay marxalado khadhaadh iyo waliba kuwo macaan waxaana dagaalada ku nafwaayay kumanaan ka mid aha mujaahidiinta Somali galbeed. Waxaa ku barakacay boqolaal kun oo shacab aha waxaa xabsiga u galay kumanan rayid ah, hoyooyin badan ayaa assay loo xidhay, ubad badan ayaa agoontoobay, halyeeyo badan ayaa haadda loo wadhay.
11/8/1992 waxay ahayd taarikhdii ugu xumayd ee soo mara halganka midowga jabhada Somali galbeed waxay ahayd ayaan murrugo wayn u ahayd dhamaan dadka ku dhaqan gayiga Somali galbeed. Waxayna tariikhada wadanka Somali galbeed gashay baal madow waxaa ku shahaado qaatay goobta loo yaqaano HALLOYO ee qadar dhowr iyo toban killo mitir ah u jirta magalada DHANAAN gudoomiyihii jabhada Somaligalbeed SH.CABDULLAAHI MACLIN MAXAMED AADAM CARROG(CABDULLAHI BADE) iyo waliba kuxigeenkiisii SH CABDULLAAHI SH AXMED MACALIN QAASIM(CABDULAAHI YARRE). Waxaana sidaas oo kale ku shahada qaatay dagaalkaas kadhacay HALLOYO sarakiil iyo waliba askar ka tirsanayd jabhada Somali galbeed.
Laga soo bilaabo maalintaas ay geeriyoodeen saraakiishii jabhada Somali galbeed waxay billowday jabhadu dagaallo waawayn oo aargudasha ah, kuwaas oo ay ku qudhwaayeen boqaal askari oo Ethiopian ah. Waxaa xusid mudan dagaladii lagu jabiyay Ethiopia, waxana ka mid ahaa dagaalkii caanka noqday oo kadhacay QORRA oo 20 km ujirta dagmada dhanaan iyo waliba UGUNJE, YEED, HAAR-CAD, FADHIID,SAGAG iyo GARASLEY, kuwaas oo cashar lama iloobaan ah loogu dhigay ciidamada Ethiopia.
Maalinba maalintii ka danbaysay jabhada awoodeeda way soo wiiqmaysay, dhanka dawlada Ethopiyana way dar dardar galisay dagaladii ay kula jirtay xoogagii jabhada. Waxayana qaaday dagaalo ay adeegsanaysay diyaarado iyo taangiyaal, kuwas oo ku qasbay in jabhadu halba meel aado waxaana laga qabsaday jabhada dhamaan saldhigayadeedii iyo waliba saanad iyo hub farabadan.
Halgankii jamhada Somali galbeed waxa uu galay marxalad addag oo aad u khadhaadh, waxayna billaabeen dagaal ku dhufoo ka dhaqaaq ahaa, kaas oo galaftay nolasha ciidamo badan oo ah kuwa dawlada Ethiopia, kuwaas oo waligood ku faana in ay yihiin libaaxyada Africa balse ay liicin waayeen garab safarayda jabhada Somaali galbeed oo hensaysatay qoriga habeena guura dheer u galay haleelista gumaysiga iyo hujuumka daa,imka ahaa.
Halyayada jabhada Somali galbeed waligood kama aysan hakanin in ay heegan u ahaadaan difaaca dalkooda iyo diintooda taas oo ay ku gaadheen meeqaansare lagunadaray liiska cadow naafeyaasha colladooduna ay sii camirmaysay cassar iyo habeen noolna ay ku cawayn jireen caydhsashada ciidamada wayaanaha. Waxayna in badan cagga gub badeen ciidanka tigreega, maxay ciidhib jareen ciddiya xun wayaanaha, maxay cishqiday naftoodu in ay daaru shuhadaa galaan.
Halkankii dheeraa ee ay soo gashay jabhada Somali galbeed wali ma damin dabkiisii oo waa sii dararay darqiiqyada afdheer iyo dagmada dhanaan dabaqle wayanaha kuma durbaan tunto dagmadeeda qalafe iyo goday duhur maladaan,dareen li,I kuma maraan dabahabka shay goosh,dannood iyo dur duurtii waldaya daranka baary ahana waa daa im dagaal taagan ciidamada wayanaha marka ii ay dariiiqyada mari dacalada ayay iska dayaan dibadeedna dur duro ayuu kugalaa daleeda uu mari markii ay gaaladii dubantay shacabkii rer somaligalbeena dabcay ayay daacad uwada fadhiistaeen sarakiisha sar sare ee jamhada iyo shacabka rer Somali galbeed oo iskaashan haya dibadeed wayaanadii dibarada xummayd dalbatay xabad joojin diyaarna utahay in ay darin kuwada hadaal halkii ay horaan wayaanuhu kudara daar walin jireen in ay dabar jarayaan da,yarta rer Somaligabeed ee difaacaysa dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba.
3/4/2010ka waxay ka mdi tahay maalmaha ay taariikhada shacabka Somaligalbeed gaar ka uxusi doonto. Waxay dawalada Ethiopia oo daalanaan ka muuqato iyo halyayada jabhada Somali galbeed heshiis xabad joojin ah ku sixiixdeen wadan ka baxsan wadanka Somali galbeed iyo waliba kan Ethiopia heshiiskaas waxaa soo dhawyeen dhamaan bulasha waynta reer Somali galbeed oo caan ku noqday guumaysi diidka iyo u dagaalanka xoriyada dalkooda iyo difaca diintooda..
Shacabka reer somaali galbeed, waxa uu halgan adag oo aan miciin helin kula jireen dawlada Ethiopia, taas oo tageero badan ka hesha dawaladaha giristaanka faafiya halaka ay shacabka reer Somaligalbeed ku halgamahayeen caanaha geelooda. Ayga oo u dhabar adaygayay xilliyada addag ee soo maray. Waxayna shacabku maanta joogaan meeshay waligood hiigsanayeen mar hadii cadowgii handadahay wada hadal ogaaladay oo uu leeyahay aan heshiino taas oo ay ka,aqabaleen madaxada jabhada iyo shacbkuba in ay wada hadal la galaan dawlada Ethiopia.
Soo shacbixidii in ay jamhada Somali galbeed heshiis hordhac ah la sixiixatay dawlada Ethiopia waxaa afka furtay ururo iyo dad badan oo qandaras ku cuni jiray dubashada shacabka reer Somaligalbeed. Kuwaas oo ay ka soo xidhantay rajadii ay ka qabeen in ay maalin walba uqoob xidhnaado shacabka reer Somali galbeed. Ciidamda Ethiopia ayay kaga doorsan jireen daafiga madoow(ku doors walalka daafi madow waxaa laga helay wadamada dariska la aha wadanka Somali galbeed!!!).
Saxafada u shaqaysa dadka qandaraaska ku cuna dhibtada shacabka reer Somali galbeed waxay soo tabiyeen in uu isdhiibay ururkii midowga jamhada xoraynta Somali galbeed oo ay ku biireen dawlada Ethiopia si ay u gumadaan shacabka reer Somali galbeed, intii hanbada ahayd ee ka soo hadhay. Taas oo wadhi ku reebtay dadbadan oo Somali ah, waxaana yaab noqotay jamhada u soo halgamaysay shacabkeeda in ay ka korqaado gumaysiga ka jaqayay dhigoodda in ay hadana isu dhiibtay si ay shacabka ugaamod.
Waxaa ka mid aha saxafada ku caanbaday buun buuninta warka aan sal iyo raadka lahayn saxafada ku hadashaa afka kooxda Jwxo-shiil, taas sanadihii danbe ay xurguf siyaasadeed ka dhax aloosnayd iyada iyo jabhada Somaligalbeed khilaafkas oo salka ku hayay markii ay garabsaar lasmaystay garab ka mid ah jabhada O.N.L.F oo haatan hogaamiyo salaxudiin.
Shabakado ay dadka somaliyeed oo guyeedhaan hoyga beenta iyo buun buuninta oo ku hadla afka koxda ay awoodeedu sii wiiqmaysay, ayaa shaciyay in ay iskhilaaftay jabhada somlaigalbeed sidaas daraadeed ay qayb ka mid aha isu dhiibtay dawlda Ethiopia iyaga oo malinba war horleh oo burinhaya kiihore ku daabaca webabka ay usamayteen in ay kumaan wareeriyaan dadka rer somaliglabeed. Hasa yeeshee waxa uu hadalkoodii noqday mid ka mid ah uun beentii lagu bartay ka dib markii ay dawlada Ethiopia ka shacisay saxafada in ay heshiis hordhac aha la sixiixatay jamhada Somali galbeed,waxaa iyyana xaqijiay heshiiskaas madaxda sarre ee jamhada somlaigalbeed U.W.S.L.F MIDOWGA JAMHADA XORAYNTA SOMLIGALBEED.
Jamhada onlf 6dii sanee la soo dhafay waxay gashay rajjo madow oonan lahayn meel ay ugabaxaan, ka dib markii ay khilaaf wayn soo dhaxglay madaxda sarsare ee jamhada khilaafkaas oo sababay gacan ka hadal. Waxaana la wada ogsoon yahay in garab ka mid aha jamhada onlf gees u istagay oo maanta leeyahay gudoomiye saraakiil gaar u aha gacan ka hadalkii dhaxamay jabhada onlf dhaxdeeda waxa uu galaftay sargaal sare oo caan ka aha wada Somali galbeed kaas lagu magacaabi jiray MAXAMED SIRAAD DOLLAL. Ka dib markii ay soo shaac baxday geerida Dr. Dolal, waxaa ku furmay jamhada onlf mowjado muran, is qabqabsi dhaxdooda aha waxayna jamhada onlf garabkii Dolal ku eedeeyaan garabka maxamed omar cismaan in uu isagu ka danbeeyay dilkii Dr. Dolaal iyyga oo sabab uga dhigay labo weerar oo ay doonahayeen garabka ina cumar cismaan in ay ku kharajiyaan Dola,l weradaasi mid ka mid aha waxa uu kadhacay xeryaha qaxootiga ee wadanka Kenya midka lagu dilayna waxa uu ka dahcay wadanka Somali galbeed gudihiisa meesha lagu magacaabo Elale. Waxaa GABO GABO ku dhexmaray dagaal xoogan oo uu Dr. dolal dirqi kaga baxsaday cutub ka tirsan garabka maxamed cumar cismaan iyo ilaladii Dolal.
jabhada Somali galbeed waxa ay wadanka ku leedahay shacbiyad wayn, waxayna kaga horaysaa jabhada onlf iyo waliba mamulka killalka, dhaqaale, siyaasad, shacbiyad taas oo maanta horseed u noqotay in lala xaaltamo halkay xaajo horay u ahayd xabad iyo xassuq mid uun uxillo. Ka war helitaankii shacab waynaha reer Somali galbeed ay ka warheleen in ay maanto xajadu tahay xabad joojin iyo wada xaaltan, ayaa waxay soo direen hambalyo iyo bogaadin kuwaas oo ay soo kala direen dhamaan jaliyadaha reer Somali galbeed ee ku sugan aduuka daafihiissa.
Qoraalkan waxaa na soo gaadhsiiyey akhriste ka mid ah akhristeyaasha bogga rasaas.com